सुन बजारमा बेथिति : तोलामै ३ हजार रुपैँया बढी, किन गर्दैन सरकार अनुगमन ? « Lokpath
२०७७, ११ पुष शनिवार ११:४२
सुन बजारमा बेथिति : तोलामै ३ हजार रुपैँया बढी, किन गर्दैन सरकार अनुगमन ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ पुष शनिवार ११:४२
कमला अर्याल-काठमाडौं। फितलो अनुगमनका कारण सुन व्यवसायीहरुले मनलाग्दी मूल्य लिँदापनि सरकार रमिते बनेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सुन व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा २ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बढी मूल्यमा सुन बिक्री गरिरहेका छन् ।
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुन व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकबाट नै सुन खरिद गर्नुपर्छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट सुन खरिद गर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले उपत्यकाबाहिरबाट पनि सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुले त्यसैको फाइदा उठाउँदै बढी मूल्यमा सुन बेच्ने गरेका छन् ।
व्यवसायीहरु सुन खरिदका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ आउँदा बस्ने, खाने तथा यातायात खर्च समेत जोडेर सुन बिक्री गर्ने गर्छन् । जसका कारण उपत्यका बाहिरका उपभोक्ताहरुलाई तोलामै ३ हजार रुपैँयासम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया सुन व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यमा सुन बेच्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायी सुन लिन आउँदा लाग्ने खर्च सुन बिक्री गर्दा जोड्न पाइँदैन । तर व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि बढी मूल्य लिइरहेका छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ स्रोतका अनुसार उपत्यका बाहिरका प्राय सबैजसो व्यवसायीले बढी मूल्यमा सुन बेचिरहेका छन् । महासंघबाट यस विषयमा कैयौंपटक रोक्न सरकारलाई अनुरोध समेत भएको तर सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि व्यवसायीहरुको मनोवल झनै बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
काभ्रेका एक सुन व्यवसायीले पनि उपत्यका बाहिरका व्यवसायीले बढी मूल्यमा सुन बेच्ने गरेको बताए । विशेष गरी उपत्यका बाहिरबाट महासंघमा नेतृत्व गर्नेहरुले बढी मात्रामा यस्तो चलखेल गर्ने गरेको ती व्यवसायीको भनाइ थियो ।
सुन व्यवसायीहरुले वर्षौँदेखि यसरी उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । के गर्दैछन् त उपभोक्ता अधिारकर्मीहरु ? यतिका लामो समयसम्म उपभोक्ता ठगिँदा पनि अधिकारकर्मीहरु आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै चासो नै देखाएका छैनन् । हालसम्म उनीहरुले यस विषयमा आवाज समेत उठाएका छैनन् ।
उपभोक्ताहीत संरक्षण मञ्च नेपालका उप महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले सुन आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा नपरेकाले पनि त्यता ध्यान नगएको बताए । तर आगामी दिनमा यस विषयमा आवाज उठाउने उपमहासचिव तिमल्सिनाको भनाइ थियो । अहिलेसम्म सुनमा उपभोक्ता ठगिएकोे भन्दै उजुरी पनि मञ्चमा परेको छैन । त्यसकारण पनि आवाज नउठेको उनले बताए । तर अब भने चुप नबस्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
सरकारको फितलो अनुगमनका कारण व्यवसायीले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । सुनमा लिइएको बढी मूल्यका बारेमा सरकारलाई जानकारी नै नभएको भने होइन । चार-पाँच वर्ष अघि नै यस विषयमा सरकारले अनुगमन गरेको थियो । जुन वेला उनीहरु नै अख्तियारको छानबिनमा परेका थिए । तर यतिवेला भने सुनको बढी मूल्य लिएको विषयमा कुनै पनि उजुरी नपरेकाले अनुगमन नगरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्त संरक्षण विभागका अनुगमन शाखा प्रमुख सागर मिश्रले बताए । ‘हाम्रोमा उजुरी नै परेको छैन, कसरी गर्ने अनुगमन ?’ प्रमुख मिश्रले भने ।
उजुरी नै नपरे पनि उपभोक्तालाई कुनै समस्या परेको छ या ठगिएका छन् कि भनेर सरकार नै चनाखो भएर अनुगमन गर्नुको सट्टा उल्टै क्षमताले नभ्याउने भन्दै उम्किएको छ सरकार । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण व्यवसायीहरुको मनोवल बढ्दा सुन बजारमा बेथिति मौलाएको छ ।
ट्रम्प दोश्रो विश्वयुद्धपछि पदमा रहँदै चुनाव हार्ने चौथो राष्ट्रपति
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले हाले सम्पन्न चुनावमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई
हुम्लामा छैनन् एक जना पनि कोरोना संक्रमित
हुम्ला । हुम्ला हिजो (बिहीवार)देखि कोरोना संक्रमण मुक्त भएको छ । यसअघि कोरोना
धौलागिरिमा अस्पालमा पहिलोपटक हाड्डीको सफल प्रत्यारोपण